Tsy mbola mandray nono, omena ratsantanana
Breastfeeding Videos Azo atao aloha ny manome ratsantanana ny zaza raha toa ka tsy mbola mandray nono izy. Marihana fa io fomba io dia atao hampitony ilay zaza sy hampitsetsitra azy tsara. Mahalana mihotra ny 60 segondra io. Tsy tokony atao fomba fanampiana nono rehefa tsy mety mandray nono io. Raha toa ka ilaina izany dia omena eo amin’ny nono ny fanampiana. Nalaina sary ity zaza ity satria efa nandray nono izy tao aorian’izy nomena nono tamin’ny ratsantanana
Maninona izy no tsy mandray ny nono ankavia amin’ity horonantsary ity? Satria efa ninono tamin’ny nono ankavia izy dia mihena ny fikorianan’ny ronono: ny zaza dia tian nono mikoriana haingana, ka na dia nanampy ny fivoahan’ny nono aza ny fanampiana nono dia tsy ampy azy izany
Naninona izy no nandray ny nono ankavia?
Satria mbola tsy ninono avy tamin’ny nono ankavia izy, fa “feno” kokoa ilay nono ary nikoriana malaky ny ronono. Ny zaza dia tia ronono mandeha mafy
Mariho fa tsy terena hijanona eo amin’ny nono ilay zaza. Raha toa izy ka sahirana, na mandray ny nono ao anaty vava fa tsy mitsetsitra, na mitomany, dia avela miala izy dia avy eo averina indray. Raha toa ka mandray nono ny zaza, tsy misy terena hijanona amin;ny nono izy satria efa mandray nono
Raha toa ka tsy mandray nono ilay zaza, tsy misy vokany ny hanerena azy hijanona eo amin’ny nono ary mety vao maika mahatezitra azy na izy vao maika mety tsy hietsika